Faah faahin:- Askari ka tirsan ciidanka dowladda oo rasaas ka fakatay ugu geeriyootay laba qof – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Askari ka tirsan ciidanka dowladda oo rasaas ka fakatay ugu geeriyootay laba qof
Waxaa faah faahin dheeraad ah kasoo baxaysaa askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo gelinkii dambe maanta degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho rasaas uga fakatay seddax qof oo la sheegay inay kamid ahaayeen arday doonaysay inay daawadaan ciyaarta kubada cagta ah.
Labo kamid ah seddaxdaasi qof ee rasaasta ku fakatay ayaa la sheegayaa inay isla goobtaasi ku geeriyoodeen halka ruuxa kalena uu dhaawac fudud soo gaaray, kadib markii ay isku dayeen inay si lacag la’aan ah ku galaan goobta ay ciyaarta ka socotay.
Askariga dilka geystay ayaa la sheegayaa inuu ilaalo ka haayay goobta ay ciyaarta ka socotay, waxayna ciyaartaasi u dhaxeeysay Iskuulada Al- Surca iyo Camuudka oo mid ah iskoolada waxbarasho ee ku yaalla degmada Dharkenley ee magaalada Muqdisho.
Ciyaartaasi ayaa la sheegaya in lagu daawanayay lacag dhan 2-kun oo shillinka Soomaaliga ah oo ay ciidanka ka qaadayeen dadka usoo daawasho tagaayay ciyaarta oo xilliga galbihii la qabto.
Dhalinyaradda la toogtay ayaa la sheegayaa inay askariga u sheegeen inaysan wax lacag ah heysan ayna doonayaan inay daawadaan ciyaarta, balse muran dheer kadib ay askarigii rasaasta ka fakatay.
Dad goob-joogayaal ah ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in labo kamid aheyd dhalinyaradaasi rasaasta ku fakatay ay isla goobta ku geeriyoodeen halka midka seddaxaadna uu dhaawacmay.
Si kastaba ha ahaatee, dilkaan ayaa kusoo beegmaya xilli subaxnimadii maanta askari katirsan ciidanka nabad sugidda Qaranka ee NISA uu agagaarka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ku dilay haweeney da’ aheyd oo dooneysay inay ka dhoofto garoonkaasi, balse ay halkaasi ku geeriyootay.